SOMAROHO ANDIANY FAHAEFATRA : Anaty fety tanteraka ireo vahoaka tonga maro ao Nosy Be
Efa am-bolana no nandrasan’ny besinimaro ny fahatongavan’ity Festival Somaroho, izay karakarain’ny tarika Wawa sy ny orinasa Telma. 4 août 2017
Tonga hanotrona ity hetsika goavam-be ity avokoa ny ankamaroan’ ireo Malagasy monina any ivelany, noho ny fitiavan’izy ireo ny ambiansy manokana atolotry ny tarika Wawa.
Nanomboka tamin’ny talata 2 aogositra lasa teo, ka hatramin’ny 6 aogositra ho avy izao dia milomano anaty fety sy hafaliana tanteraka ny vahoakan’i Nosy-Be Hell-Ville miaraka amin’ireo mpanakanto malagasy sy vahiny ary ireo mpizaha tany, mandritra ny fankalazana ny festival Somaroho, izay tohanan’ny orinasa Telma.
Raha ny vaovao voaray dia efa rakotra olona ny tanàna ary misesisesy ny fety miaraka amin’ireo hetsika madinika isan-karazany. Taloha, raha somary sadaikatra ny olona ny hiala sasatra any Nosy-Be dia efa mihamaro kosa ireo misafidy ny handeha any an-toerana noho ny fisian’ireo hetsika maro samihafa. Efa feno avokoa ny ankamaroan’ireo toerana fandraisam-bahiny ary ny ankamaroan’ny olona dia nanofa ireny toeram-pianarana na tranon’olon-tsotra ireny mandritra ny fandalovan’izy ireo ao Nosy-Be.
Efa mianoka tanteraka ao anatin’ny fety aman-danonana ireo mpanotrona any Nosy Be, ka ny talata lasa teo, ohatra, dia ny fifaninanana bika aman’endrika “Miss et Mister Afro Somaroho” no notontosaina. Fifaninanana izay nandraisan’ny tovolahy sy tovovavy miisa 18 anjara. Izy ireto izay samy nanana ny volo lava na “afro” na ireny somary olioly. Nahitana fifaninanana fanatanjahantena toy ny baskety, izay nandraisan’ireo mpilalao dimy sangany tao amin’ny ekipa N1A Madagasikara, anjara.
Nanomboka afak’omaly ny seho an-tsehatra isan-karazany izay nandraisana mpanakanto malaza maro anjara.
Ny maraina dia toy ny mahazatra, nosokafana tamin’ny alalan’ny diabe na “carnaval” ny hetsika. Olona maro no nandray anjara tamin’izany, izay samy nisalotra fitafy manaitra sy mampiseho kolontsaina avy any Nosy Be avokoa. Nihodina manerana ny tanàna ny rehetra ary tehaka sy horakoraka no nandraisan’ny mpijery ireo mpilahatra. Nizotra avy hatrany tany amin’ny kianjan’ Ambodivoanio ny rehetra avy eo ary tany no nanatanterahana ny fanokafana ofisialy ny hetsika.
Tovolahy mpangarom-paosy tokony ho 28 taona saika matin’ny fitsaram-bahoaka AMBODIMITA (3553) 18 février 2021 Ho fantatra tsy ho ela ny anaran’ireo olona ambony voarohirohy FANODINKODINANA VOLAM-PANJAKANA (340) 18 février 2021 Nitafy fahafaham-baraka tanteraka ireo Mpanohitra HETSIKA FANAKORONTANANA (209) 22 février 2021 Miantso ny vahoaka tsy hanaiky horebireben’ny mpanakorontana ny FMIEM HETSIKY NY MPANOHITRA (109) 18 février 2021 Nokaramaina ireo olona nanakan-dalana tamin’ny vato JENERALY RAVALOMANANA RICHARD (99) 22 février 2021 Mpanafika taksimoto iray maty voatifitra, valo azo sambo-belona ANDILAMENA (80) 18 février 2021